Real Gaming Myanmar - Page 85 of 148 - Real Gaming & Technology
သင့်ကို မြန်မြန်ရုပ်ရင့်သွားစေတဲ့ နေ့စဉ် အလေ့အထ ( ၁၀ ) မျိုး
သင့် ရုပ်ရည်က လက်ရှိအသက်ထက် ပိုရင့် နေသလား။ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် ရုပ်ရင့်တာအပြင် သင်နေ့စဉ်နေထိုင်စားသောက်မှု အလေ့အထ တချို့ကြောင့်လည်း မြန်မြန်ရုပ်ရင့်စေပါတယ်။ သင့်ကို ရုပ်ရင့်စေတဲ့ အလေ့အထတွေကို ပြောင်းလဲကြည့်ရအောင် … …
စနေတွေကို လျှော့ မတွက်ပါနဲ့ စနေတွေ အကြောင်းလေ့လာကြည့်ပါဦး စနေတွေဟာ…..
စနေတွေကို လျှော့ မတွက်ပါနဲ့ စနေတွေ အကြောင်းလေ့လာကြည့်ပါဦး စနေတွေဟာ….. (၁) နောက်ဆုံးမွေးနံဖြစ်ပေမယ့် အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အများတကာထက်…. ရှေ့ဆုံးကနေ ဦးစီးဦးဆောင် ပြုရမှ ကျေနပ်သူတွေပါ …. ။ …
ချစ်ရတဲ့သူက သင့်ကို လစ်လျူရှုထားတဲ့အခါမျိုးမှာ လုပ်သင့်တဲ့အချက် (၅)ချက်
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေဆီကနေ ဂရုစိုက်မှု၊ အလေးပေးမှုကို လိုချင်ကြတာ လူတိုင်းပါပဲ။ ချစ်တဲ့သူတွေဆီက လစ်လျူရှုခံထားရလို့ နာကျင်ကြေကွဲရတဲ့အခါ ဖြေသိမ့်ဖို့ သိပ်ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ ရှုံးနိမ့်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကနေ ကောင်းကောင်းလွတ်မြောက်နိုင်ပြီး စိတ်ကြည်လင်ပါလိမ့်မယ် …
နွားထိုးကြီးမြို့ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်နေ မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မာမာအေးသည် မြို့ထဲ၌ ဈေးဖိုးများလှည့်လည်တောင်းနေစဉ် သမီးဖြစ်သူ မဟေမာဝင်းမှ နေအိမ်တွင် သားဖချင်းရန်ဖြစ်၍ ဖခင်ဖြစ်သူနှင့် ညီအစ်မတစ်တွေဒဏ်ရာများရရှိနေကြောင်းဖုန်းဆက်အကြောင်းကြား၍ နေအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ရာခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုအောင်မင်းနှင့် သမီးများဖြစ်သူမခိုင်ဇာလင်း၊မဇင်မာစိုးတို့၏ ဦးခေါင်းများ၌ သွေးထွက်ဒဏ်ရာများဖြင့်တွေ့ရှိ၍ မေးမြန်းကြည့်ရာသမီးဖြစ်သူများနှင့်ခင်ပွန်းဖြစ်သူတို့စကားများရန်ဖြစ်သတ်ပုတ်ခဲ့ပြီးသမီးဖြစ်သူများမှ …
အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေ ဘာလို့ချစ်လျက် လမ်းခွဲခဲ့ကြတာလဲ
Relationship တစ်ခု ကြာရှည်တည်မြဲဖို့ဆိုတာ နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ သစ္စာရှိမှု၊ နားလည်မှုတွေ များစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဖောက်ပြန်မှ၊ သစ္စာဖောက်မှ ဒီ အချစ်ရေးက ပျက်စီးသွားတတ်တာ လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ဘာမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းအရာအသေးအမွှားလေးနဲ့လည်း …
နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့မှာ မိဘတွေရဲ့ ခြေရာယူပြီး ကုသိုလ်ပြုနိုင်ကြဖို့ အဆင့်ဆင့် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် …..
နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့မှာ မိဘတွေရဲ့ ခြေရာယူပြီး ကုသိုလ်ပြုနိုင်ကြဖို့ အဆင့်ဆင့် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ … ၁။ ဆနွင်းအနည်းငယ် ၂။ နှမ်းဆီ အနည်းငယ …
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုအရမ်းလွမ်းနေမှန်းသိနိုင်မယ့် ထူးထူးခြားခြား လက္ခဏာ (၃) မျိုး
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုအရမ်းလွမ်းနေမှန်းသိနိုင်မယ့် ထူးထူးခြားခြား လက္ခဏာ (၃) မျိုး အချစ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ မှော်စွမ်းအင်ရှိတယ်လို့ လူတစ်ချို့ကပြောကြပါတယ်။ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုလွမ်းတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဖွင့်မပြောရင်တောင် သဘာဝတရားကြီးက …
ကိုယ် အရမ်းချစ်ရသူကို မချည်နှောင်ပါနဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် ပေးထားပါ ချည်နှောင်မှ ငြိမ်နေမယ်ဆိုရင် သင့်အပေါ် တကယ် မချစ်လို့ပါ။
မချည်နှောင်ပါနဲ့ ! ကိုယ် အရမ်းချစ်ရသူကို မချည်နှောင်ပါနဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် ပေးထားပါ …။ ချည်နှောင်မှ ငြိမ်နေမယ်ဆိုရင် သင့်အပေါ် တကယ် မချစ်လို့ပါ …။ တကယ်ချစ်တဲ့သူဆိုတာ အနေနီးသည်ဖြစ်စေ …
ပြန်မပြောနားမထောင် အင်္ဂါ အာရုံနောက်တာ မကြိုက်ကြဘူး …။ အရွဲ့ တိုက်တဲ့ နေရာမှာ နှစ်ယောက် မရှိဘူး …။ ဒေါသ ထွက်လာရင် ဘယ်သူမှ တားမရအောင်ထိ သောင်းကျန်းကြတယ် …
တစ်ပတ်အတွင်း ဆံပင်အရှည် မြန်စေမယ့်နည်း
တစ်ပတ်အတွင်း ဆံပင်အရှည် မြန်စေမယ့်နည်း ဆံပင်ဆိုတာဟာ မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ အရေးပါတဲ့ အလှ အပဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ဆံပင် ညှ ပ်ပြီးမှ ဆံပင်အရှည်ကို ပြန်တမ်းတနေကြတဲ့ ပျိုမေတို့ …
Page 85 of 148« First...607080«8384858687»90100110...Last »